SAMAALE HADDANU HAYN XISAAB-XIDHKII 2013 MIYUU KU RIYOODAY MIISAANIYADDA 2014. | SomalilandEMBASSY.com
Wednesday, October 9th, 2013 | Posted by SLE
Waxad muuda in xukuumad u fahamsantay in bulshada Somaliland tahay dad aan waxba fahmin, waxba aqoon, waxba xusuusan, dad dhoohan iyo doqon marba dhan loo jiifiyo.
Waxay inoo keentay miisaaniyad magacyo badan ooy inuu shrrgta inay ku kordheen intaasi. Waxa leynagu jaahwareeriya Miisaaniyadda Xukuumadda iyo tan Dawladda.
Ma aragno miisaniyad dhammeystiran oo bulshadu akhrisan karto, ka faaloonkarto, oo ina tusi karta sida xaalka dhabta ahi yahay. Waxa duuduubi leynagu sheega khrashyo guud oo waxa la qariyaa halka khrashyada Wasiiradu dhacaan ku jiraan. Cadka shiilan ee cunista u diyaar ah,dambasba la huwiya.
Waxa intaba ka daran, weedha Samaale ka soo yeedhay ee ah ma hayo xisaab-xidhkii oo waxaay ku maqantay xisabiyaha guud, suįashu waxay tahay miyeyna ahayn xisaab-xidhku mid bil walba ah, miyeyna se jirin in Guddiga Miisaaniyadda la siiyo xisaab-xidh seddexdi biloodba mar ah, mise waaxa Golahani helaa xisaab mala awaal ah oo isbarbar taal kolkas ayey asnsixiyaan mala-awaalkan ayna dhinac oolin xisaab xidhkii dhabta aha.
Halkay ka jirta markaas ilalinti laga rabay Golahu. Sidii lagu ogaan kara in miisaaniyaddu martay dhabadi saxa ahayd. Waxa ka daran aqoon daraada xisaabeed iyo sharciyeed ee Saamle iyo Golahuba ka muuqata. Xisaab xidhku waxa Golaha horkeeni kara Hantidhowrka Guud. Waxa laga rabaa Xisabiyaha Guud inuu curiyo xisaabta hantidhowrkuna saxo deedna uu u gudbiyo Golaha.
Taas wxa ka horeeya in Miisaaniyadda Maaliyaddu keenta wadato sharashyada dhabta ah ee la galay bilaha ilaa bisha ay soo qadimeyso miisaniyadda. Haddii la keeno lambaro lagu riyooday oon gunta ku hayn xaqiiqda, ma tahay wax macno inoo sameynaaya.
Miisaaniyadda Aw Samaale ku riyooday ayuu waliba ku helay shahaadad aan ahayn wax kale bal se ah waajib gudasho la’aanta Golaha ay buuxiyeen Xil-gabayaashu.
Madaxweyne waan kuu duceeya ee Alle ha ku tuso inanad gudan karin waajibadka laguu doortay caafimaad dartii. Alle ha ku tuso in ummadi ku doortay arkaan xil-gudasho laįanta ku haysay iyo sida taladi dalku u gacan gashay dad aan garasho iyo waayaaragnimaba ka aradan.
Cabdi Xaaji Axmed
Short URL: http://somalilandembassy.com/?p=230
Posted by SLE on Oct 9 2013. Filed under Fikradaha/Opinions. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
1 Comment for “SAMAALE HADDANU HAYN XISAAB-XIDHKII 2013 MIYUU KU RIYOODAY MIISAANIYADDA 2014.”
November 3, 2013 - 4:34 pm
Cabdi waa intaas oo looga sii dhawaado. Ma odhan karo waan kugu raacsanahay faaladaada, waxanse ka eegi lahaa dhan kale. Haddii hantida dawladda (dadweynaha) la cunayo, ka aan wax cuninna loo haysto nacas, sidee u heli kartaa dad xilka u gudan karo? Miyey wasiiradu daaro dhisteen? Miyaa Wasiirku qof ahaan ay ka muuqataa in isticmaalayo lacag aanu qaadan? Mise waa qaataye qaado? Ma dhadhawa, Waxan Alle ka baryayaa in uu xaqqa ina waafajiyo.